Manakombona ny Vavany amin‘ny “Scotch” Ny Mpiangaly Mozika An’Arabe Ao Maosko Mba Hanoherana Ny Famoretana Ataon’ny Polisy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2015 11:08 GMT
Ny fitombon’ny fanagadràna sy ny sazy ataon’ny polisy no tena antony nanosika ny mpiangaly mozika hanao hetsi-panoherana, izay inoan’izy ireo fa tsy misy antony ara-dalàna. Nanoratra tamin’ny Facebook i Oleg Mokryakov, mpitarika ny fiombonan’ny mpiangaly mozika ao Arbat, hoe te-hisarika ny sain'ny vahoaka sy ny governemanta ao an-toerana ho amin'ilay olan'izy ireo ny mpiangaly mozika. Namoaka sary vitsivitsy mikasika ny hetsi-panoherana i Mokryakov, izay mampiasa ny pejy Facebook-ny mba hanome tahirin-kevitra momba ny fanagadràna manerana an’i Maosko.
Nampanantena i Mokryakov fa hitohy foana ny hetsi-panoherana ary lasa “miha-tsara kokoa” mandra-pahatongan’ireo izay nanararaotra ny fahefany ho voatàna ho tompon'andraikitra.
Toa miray fo amin’ny tolon’ny mpanakanto ny mponina ao Maosko, na tao amin’ny valinten-dry zareo ho an'ny media lehibe izany, na tao anaty tranonkala. Nolazain'i Yury Saprykin tamin'ny onjampeo “Akon'i Maosko” fa heveriny ho toy ny “fitafiana voajanahary ho an’ny tontolo iainana an-drenivohitra” ireo mpanakanto eny an'arabe, ary lazainy hoe tsy “antony tokony hisamborana” “ny mozika mafy eny amin'ny araben’ny tanàna.”
Raha manao voady ny hanohy ny tolony ny mpiangaly mozika ao Arbat, ny manampahefana ao Maosko kosa toa nihetsika nanoloana ilay hetsi-panoherana tany am-boalohany. Nitsangana nanohitra ny fanohanana ny hevitra hamorona rafitra momba ny patanty ho an’ny mpanakanto an’arabe i Aleksandr Kibovsky, filohan'ny Departemantan'ny Kolontsaina ao Maosko, hoy ny tatitra nataon'i Slon. Ny patanty, izay volavolain’ny departemanta sy ny komity ao amin'ny Duma ao Maosko amin'izao fotoana izao, dia mety hamela ihany koa ny fiparitahana'ireo mpiangaly mozika hanerana ny distrika ao Maosko, ary hikoriana indray ao amin’ny tetibolan’ny tanàna ny saran’ny patanty. Tsy mbola mazava ny fomba mety hiasàn’ilay rafitra patanty naroso ary raha toa ka mety hampihena ny loza mitatao amin’ny fanagadràna “ivelan’ny lalàna” ataon’ny polisy izany.
Nankasitraka ny fanapahan-kevitry ny manampahefana ao amin’ny tanàna mba hiatrehana ny fangatahana nataon'ny mpanakanto i Oleg Mokryakov, mpitarika tsy ofisialy ny hetsi-panoherana, fa nanameloka kosa ny famoretana tsy ankijanona ataon’ny polisy amin’izy ireo, miaraka amin'ny mpiangaly mozika maro nogadraina any amin’ny faritra maro ao Maosko tamin'ny andro izay nandinihan’ny manampahefana ny toe-draharaha manjo azy ireo.